Mashiinka Qalinka Tattoo-la'aanta ah ee Shiinaha, Waxqabadka sare ee mashiinka qalinka Soo-saar iyo Warshad | MOLONG
Mashiinka Qalinka Tattoo-ga Bilaashka ah, Mashiinka qalinka waxqabadka sareeya
2020 Cusub & Kulul Qalinka Mashiinka Tattoo-la'aanta Qalinka Mashiinka Tattoo Mashiinka loogu talagalay Fanaaniinta Tattoo
1. Halkii laga isticmaali lahaa mashiinka qaabka qalin-qaab-dhaqameedka qalinka ah, Mashiinka Qalinka Battery-ga ah wuxuu go'doomiyay isticmaalka xarigga tattoo si loo siiyo xorriyadda tattooing-ka meel kasta iyo si kasta oo aad rabto.
2. Bandhigga 'LED' wuxuu muujinayaa danab shaqeynaya, danab iyo sidoo kale duubista waqtigaaga shaqada.
3. Shaqeyn karaa ugu yaraan 5 saacadood ugu yaraan, iyadoo kuxiran isticmaalka shaqsiga ah
4. Awoodda, heerka batteriga iyo waqtiga adeegsiga ayaa lagu soo bandhigi doonaa iyada oo loo marayo muujinta LED-ka
5. Awoodda waxaa lagu hagaajin karaa iyada oo loo marayo badhanka (+) iyo (-) siday u kala horreeyaan iyadoo la adeegsanayo danab dhan 0.1 V saxaafad kasta
Awoodda Batariga: 2000mAh
Waqtiga buuxinta: 2 Saacadood
Batariga Waqtiga shaqada: 6-8 saacadood
Danab Soo saar: 5V-12V
Dhererka istaroogga: 3.5mm
Cirbadda ka soo baxda: 0-4.5mm
Soo jeedi danab ku saabsan dahaadhka: 7.5V-9V
Soo jeedi danab for hoos: 6V-8V
Xawaaraha wareega: 8000-10000RPM
Batariga Xargaha La ' Qalinka Tattoo Waxyaabaha: Mashiinka Aluminium Baaxadda: Mashiinka aan caadiga ahayn 12V RPM: 10500 rpm Stroke: 3.5MM Cabbirka: L 131MM W 31MM Miisaanka: 126g (qabasho lahayn) Batariga: 2000mAh Adkaysi: 7 ~ 8 saacadood Midab: Madow, Cawl, Buluug, Casaan, Oranji , Dahab, Casaan
Sida loo sameeyo amar jumlo:
1. Waxaad noo soo dirtaa baaritaan.
2. waxaan kuu soo direynaa liiska qiimaha jumlada.
3. Waxaad hubinaysaa liiska qiimaha.
4. Waxaad ii soo dirtaa liiska dalabkaaga.
5. waxaan kuu samaynaynaa qaansheegad.
6. Waxaad xaqiijineysaa qaansheegadka.
7. Waxaad dirtaa lacag bixinta.
8. Waxaan diyaarinaynaa alaabtaada
9. Waxaan kuu rarnaa alaabtaada.
Dhammaan alaabooyinkeennu waxay u hoggaansamaan heerarka tayada caalamiga ah waxaana si weyn looga mahadceliyaa suuqyo kala duwan oo adduunka oo dhan ah. Khibradayada gaarka ah iyo ilaha wax ku oolka ah waxay siin doonaan macaamiisheenna OEM iyo ODM alaab aad u tayo sareysa iyo qanacsanaan aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin inaad doorataan SOO SAARKA TOLOOYINKA MOLONG!
Hore: Xooji shan & Toddoba khaanadaha qalabka wax lagu sawiro / shaashadda qalabka wax lagu duubo oo lagu kaydiyo qalabka wax lagu duubo
Maskaxda ilkaha Tattoo II Tattoo Pen oo leh Mabuchi ...
Mashiinka Qalinka Tattoo-ga ee Premium oo leh 3 qabasho dheeraad ah a ...
Mashiinka Qalinka Tattoo Tranoosaurus Rex II
MO Mashiinka Qalinka Tattoo Taajiska